Kunakidzwa kune zvakare "kuzivikanwa", RFID inowana chinyakare chiCantonese chinonaka | Toptag
RFID tekinoroji inozivikanwa seimwe yeanonyanya kuvimbisa matekinoroji muzana ramakumi maviri nemasere. Mumakore achangopfuura, nekuenderera mberi kwehunyanzvi hweRFID tekinoroji, iko kushandiswa kweRFID kwave kuwedzera nekuwedzera, kuchisvika kumatunhu ese ehupenyu hwevanhu hwezuva nezuva.
Zvinoenderana nehuwandu, iyo nyika inodya goose nyama ingangoita mamirioni mazana manomwe, iyo Guangdong Dunhu ichadya anosvika mamirioni 170. Icho chikonzero nei Guangdong inogona kudya ingangoita kota yemabhanzi emunyika gore rega rega ndeyechokwadi isingaparadzanisike kubva kuGuangdong yechinyakare inozivikanwa dhishi-yeCantonese roast goose.
Iyo yekugadzirwa kweCantonese yakagochwa goose yakanyanya kuomarara. Inosanganisira anodarika makumi maviri maitiro ekugadzira kubva pakusarudzwa kwezvinhu kusvika pakukangwa. Dzinopfuura gumi nemaviri mhando dzekugocha hosi dzizere dzinoenderana uye dzakagadzirwa, uye chero nhanho imwe inokanganisa kuravira kwehosi yakagochwa. Guangdong Jianghu Cloud IOT Technology Co, Ltd. yakazvipira kutsigira mhinduro dzekushandisa zvakadzika mune yeRFID indasitiri, uye inokwanisa kubatanidza zvigadzirwa + zveR & D + mhinduro muInternet yezvinhu. Iko kushandiswa kweRFID tekinoroji kune iyo yekutarisa yekugadziriswa kwechikafu iseti yemhinduro dzakagadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, uye zvakare iri yekutanga kuyedza kwaJianghuyun mukugadzirisa kwekugadzira chikafu.
Inonyanya kuzivikanwa roast goose cheni brand muDongguan, Guangdong, kuve nechokwadi chekuti yega yega yakagochwa inogara ichinaka, inofambidzana nekumhanya kwekuvandudza tekinoroji uye ndiyo yekutanga kushandisa tekinoroji yeRFID kune yekugadzira nzira yekugocha hanzi. Pamberi kwekuchekesa hanzi yakagochwa muchoto, hanzi yega yega inoda kupfuura nhanho dzinopfuura makumi maviri dzekufanotangisa. Maitiro ekuita chokwadi chekuvimbika kweiyo prereatment maitiro ndiyo kiyi yekuzadzisa zvinonaka.
Muchiitiko chekutanga chekuchesa hanzi, rimwe nerimwe hanzi rinogadziridzwa rinopihwa tag yeRFID, iyo yakaenzana nekadhi reID uye inoshandiswa kunyora ruzivo rwekugadzirisa. Mushure mekuita kwega kwega, ruzivo rwacho runonyorwa mu tag yeRFID kuona kuti hanzi yega yega inogona kupedzisa yega nzira yekufanotangisa kuti ive nechokwadi chekuti yega yega yakagochwa ine kuravira kwakafanana.
Kubatanidza huripo matekinoroji ane hukama, kutengesa uye ruzivo rwechigadzirwa, uye kumisikidza mafekitori akangwara nekuchinjika, kugona kwesimba uye zvehunhu zvinhu mainjiniya ndicho chinangwa cheIndasitiri 4.0 pasirese. Nyorera RFID tekinoroji kune chinozivikanwa chigadzirwa mune yekugadzira maitiro eakasiyana maindasitiri kuona kugadzirwa kwemhando uye kugadzirwa kwehunyanzvi kuongororwa, uye kugadzirisa nzira yekugadzira kuti iwedzere kushanda, kudzikisa mutengo, uye kuwedzera mabhenefiti.
RFID tekinoroji yakwezva kutarisisa kwakawanda nekuda kwekuverenga kwayo kure-kure, kugona kwakanyanya, diki saizi, akasiyana maumbirwo, kugona-kurwisa kusvibiswa kugona uye kusimba. Iyo inguva yemberi yeInternet yezvinhu zvinoshandiswa uye ekugadzirwa kwemaindasitiri 4.0 (zvine hungwaru kugadzira, zvigadzirwa, Iwo makiyi matekinoroji ehutano, zvekurima, uye chikafu chekudya chinogadzikana nenzira isingazungunuke munzira yakasiyanasiyana.
Iko kushandiswa kweRFID tekinoroji kune yekugadzira nzira yekugocha hanzi chiratidzo chekusimudzira kwakasiyana uye kushandiswa kweRFID tekinoroji. Iko kushandiswa kwepamusoro-tembiricha inodzivirira RFID ma tag akagadzirwa echikafu-giredhi PET zvigadzirwa kuti uwane iko kuzere kwekutsvagisa kwekugadzira uye kugadzirisa maitiro ehosi goose, kuverengera kuravira kwechikafu cheCantonese, uye kuita iyo yekugadzira nzira iwedzere uye yakaenzana.
RFID kanyanga ndeimwe yeanodikanwa Hardware yekushandisa kweRFID tekinoroji. Iine kukurumidza kukura kweRFID tekinoroji, RFID kanyanga yakagadziridzwa nekukurumidza. Chinangwa cheiyo antenna ndechekufambisa iwo akanyanya simba mukati nekubuda muchip. Maitiro ekufananidza dhizaini yeiyo antenna nenzvimbo yemahara uye chip chip chakabatanidzwa pairi chinhu chinotadzisa kukura kweiyo antenna.
Dhizaini uye kugadzirwa kwe RFID tag kanyanga zvinokanganiswa nezvirambidzo zvekushandisa, chimiro uye hunhu hwezvinhu zvinoonekwa nehunhu hweantena, pamwe nezvinhu zvakapoterera kanyanga uye nharaunda. Ichi chinhu chakakosha pakutsvagisa tekinoroji yeRFID mukuvandudza kwakasiyana kweRFID tekinoroji michina. nzira.
Nekufambira mberi nekusimudzira kweRFID tekinoroji, zvigadzirwa zvakawanda uye zvitsva zveRFID zvakagadzirwa uye zvinoshandiswa zvakanaka. Mune ramangwana, kuvandudzwa kweRFID emagetsi emagetsi kunozoitawo kuve wakasvibira uye kwakasiyana-siyana muzvinhu zvakasvibirira kusangana nezvinodiwa zvekushandisa kwemaindasitiri akasiyana.
Post nguva: Zvita-04-2020